I-35 YEENTSHATSHELI EZIBALASELEYO ZABAKHWENKWE (IINDLELA EZINTSHA EZITHANDWAYO EZINGAMA-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-35 Amakhwenkwe aPholileyo okucheba iinwele
Ngamakhwenkwe amaninzi anweleyo anokukhetha kuwo, ukukhetha enye yezi ndlela zokupholisa iinwele kunokuba ngumceli mngeni. Ngethamsanqa, zonke ezi zinwele zinde zincinci ezimfutshane zamakhwenkwe zinika nje abantwana ithuba lokuyila ngeendlela zabo zokucheba iinwele. Umbuzo kuphela ngulo - zeziphi ezona zinwele zilungele amakhwenkwe amancinci kunye nabantwana abancinci? Ngelixa iifayile zakho ze- umntwana oyinkwenkwe okanye umntwana omncinci omncinci unokuba nesimbo sakhe sesitayile, ngokuqinisekileyo kukho iinwele ezipholileyo ezinenkwenkwe ezinesitayile ngakumbi kunezinye. Ngapha koko, kukho neenwele zehipster eziza kuguqula umfana wakho abe yimodeli yefashoni yanamhlanje ngobusuku!
1Eyona ndawo yokucheba iinwele yamakhwenkwe
1.1Amacandelo eTapered kunye neCandelo eliPhuthiweyo
1.2Ukuphela okuphezulu kunye neCandelo eliNzima
1.3I-Undercut kunye ne-Shiny Comb Over
1.4Ixesha elide lePompadour
1.5I-Fringe Textured Fringe eneeNdawo eziMfutshane
1.6I-Mohawk kunye neFade
1.7Ukuphela okuphantsi ngeenwele zeSpiky
1.8Ukuphela okuphezulu kunye noBume obuPhezulu kunye neenwele eziGobile
1.9Ukulahleka kweBald esezantsi kunye neWavy Brushed Back Hair
1.10Phakathi koLusu luphela kunye neCandelo eliPhakathi
1.11I-Brushed Back Undercut
1.12Phezulu phezulu Afro ngeTwists
1.13Iinwele ezimfutshane zeMessy ezinamacala aPheleyo
1.14Ukuphela kweBald ephantsi kunye noYilo kunye neBhrashi ePhambili yeenwele
1.15Icala elitshayelwe ngaphantsi
1.16Amacandelo eTapered kunye neCandelo eliKhuni kwiComb Over
1.17Iinwele ezinde ezisikiweyo kunye neTaper Fade
1.18Ukuphela okuphezulu kunye neenwele ezomileyo
1.19AbaCwangcisiweyo beCrew Sika iTaper Fade
1.20Iinwele ezi-Wavy eziBuyiselweyo emva
1.21Ukucinywa koQeqesho oluQhawulweyo ngoBumbeko oluCwangcisiweyo
1.22Iinwele ezinde eziphakathi
1.23Ulusu oluphezulu luphela kunye neCandelo eliCwangcisiweyo eliCwangcisiweyo
1.24Ukuphela kweXesha eliPhakamileyo ngeNxalenye kunye neenwele eziMfutshane eziQineneyo
1.26I-Spiky Pompadour ene-Fade ephantsi
1.27Ukuphela okuphantsi kunye nesiPhezulu esiPhezulu
1.28Ukuphela okuphezulu kunye neNdlela yokuCoca iinwele
1.29Ulusu luphela kunye nesiFrentshi
1.30UkuPhela koPhuculo olusezantsi kunye neAfro
Eyona ndawo yokucheba iinwele yamakhwenkwe
Ukunceda abazali kwihlabathi liphela, siye saqulunqa ezona zinwele zipholileyo zamakhwenkwe. Ukusuka kwizinwele ezimfutshane ezinje ngamacala asecaleni, ikama elingaphezulu kunye nokuphela kweenwele ezinde ezinje ngee mohawks, ii-faux hawks, ii-curls, kunye neenwele ezi-spiky, aba bantwana bacheba iinwele basebenzela zonke iintlobo zeenwele. Bhukumaka eli phepha kutyelelo lwakho olulandelayo kwindawo yokucheba iinwele kwaye uzame oku kusikwa kunye nezitayile!
Amacandelo eTapered kunye neCandelo eliPhuthiweyo
Amacala e-Tapered alungele iinwele zokucheba abantwana ukuba awufuni nto ukuphela okufutshane . Ngapha koko, icala elitshayelweyo linokuba yinto elula yokwenza iinwele nkqu neyakho inkwenkwe encinci angazenza isitayile.
Ukuphela okuphezulu kunye neCandelo eliNzima
Amakhwenkwe ayaphela iinwele gcina amacala acocekile, amafutshane kwaye alula, ngelixa icala elilukhuni longeza inwele yodidi kodwa epholileyo ngaphezulu.
I-Undercut kunye ne-Shiny Comb Over
I-undercut yenye yeendlela ezinokupheliswa, kwaye ilungile i-hairstyle yehlobo yamakhwenkwe. Ngokufana necala elisecaleni, ikama elingqindilili ngaphezulu kokuqhubeka yenye yezona zitayile zithandwayo.
iinwele ezigobileyo taper ziyaphela
Ukuphela kwepompadour kukulungisa iinwele zamakhwenkwe kumntwana onesitayile. Uya kudinga ukumthengela umgangatho ipomade okanye imveliso yesitayile yokwenza inkangeleko.
I-Fringe ene-Fringe enefreyimu enamacala amfutshane
Izinwele zeenwele zibuyile kwisitayile kwaye oku kufutshane kweenwele zamakhwenkwe ngumzekelo ogqibeleleyo.
I-Mohawk kunye neFade
I-Mohawk, i-faux hawk kunye neenwele ze-spiky zonke zinokwenziwa ngokufana neenwele ezifanayo. Ubuncinci ubuncinci i-intshi ezi-3 zobude beenwele ngaphezulu, umntwana wakho angatshintsha inkangeleko yakhe kuxhomekeke apho aya khona.
Ukuphela okuphantsi ngeenwele zeSpiky
Iinwele ezimfutshane nezide ezinamabala yenye yezona zinwele zithandwa kakhulu kubafana.
Ukuphela okuphezulu kunye noBume obuPhezulu kunye neenwele eziGobile
Ngubani othi iinwele ezijijekileyo azinakho ukusebenza nazo? Le ndlela yokuluka iinwele imfutshane kwaye ilula isisitayile esitsha nesilula samakhwenkwe.
Ukulahleka kweBald esezantsi kunye neWavy Brushed Back Hair
Le nwele yomfana inweleyo iyimbonakalo entle yomntwana wakho uya kuyithanda ngokupheleleyo.
Phakathi koLusu luphela kunye neCandelo eliPhakathi
Iinwele zamacandelo zanamhlanje ezinikezela ngeenwele zinikezela ngokujija ngokwenwele kwentloko yendoda.
I-Brushed Back Undercut
ilanga, inyanga kunye nekhaltyhuleyitha ephumayo
Phezulu phezulu Afro ngeTwists
Iinwele ezimfutshane zeMessy ezinamacala aPheleyo
Ukuphela kweBald ephantsi kunye noYilo kunye neBhrashi ePhambili yeenwele
Amacandelo eTapered kunye neCandelo eliKhuni kwiComb Over
Iinwele ezinde ezisikiweyo kunye neTaper Fade
Ukuphela okuphezulu kunye neenwele ezomileyo
AbaCwangcisiweyo beCrew Sika iTaper Fade
Iinwele ezi-Wavy eziBuyiselweyo emva
Iinwele ezinde eziphakathi
Ulusu oluphezulu luphela kunye neCandelo eliCwangcisiweyo eliCwangcisiweyo
Ukuphela kweXesha eliPhakamileyo ngeNxalenye kunye neenwele eziMfutshane eziQineneyo
I-Spiky Pompadour ene-Fade ephantsi
Ukuphela okuphantsi kunye nesiPhezulu esiPhezulu
Ukuphela okuphezulu kunye neNdlela yokuCoca iinwele
Ulusu luphela kunye nesiFrentshi
UkuPhela koPhuculo olusezantsi kunye neAfro
wazi njani ukuba yintoni uphawu lwakho olukhulayo
uthini umbuzo wam wophawu olunyukayo
yintoni uphawu olukhulayo